Hab-dhaqanka Jaamac Maxamuud Cigaal: Guddoomiyaha Sompower Mise Wasiirka Macdanta iyo Tamarta? "Jilitaan Ka Turjumaya Weedhihiisa iyo ficilladiisa". Qore Siciid Maxamuud Gahayr.
Friday July 31, 2020 - 14:09:00 in Wararka by Super Admin
Saamiley ka tirsan Sompower oo weli Guddoomiyehoodii hore Jaamac Maxamuud Cigaal u haysta madaxa shirkadda, illawsanna inuu imaka yahay Wasiirka Macdanta iyo Tamarta ayaa Jimce u tegay Gudd-Wasiir, waxa dhex martay sheekadan:
Saamiley: Ii warran Guddoomiye Jaamac Maxamuud Cigaal?
Gudd-Wasiir: Waa nabad, imaka wasiir ayaan ahay. Igu dhaha wasiir, wasiir baan ahee, wasiir igu dhahaay, wasiirnimada qira.
Saamiley: Wasiirnimadu waa maalmo. Sompower ayaa ah halka ku hurran marka xilka lagaa qaado. Hanti ma-guurto ah iyo mansab maalmo ah ma isku doorsanaysaa?
Gudd-Wasiir: Maya wallaahi. Imaka isku-shaandhaynba waan ka baqbaqayaa, laakiin Sompower ma illaawin. Maxaad imaka rabtaa, bal isu kay sheega?
Saamiley: Saamileydii SOMPOWER ayaanu nahay, suuqii 2014kii la inoo xidhay ayay qiime jaban kula wareegayaan GAAFANE, Indha-birta iyo Tec.. Inaad wax ka qabato weeye Guddoomiye
Gudd-Wasiir: Anigaa soo saari digreeto aan odhanayo laba koronto meel ma wada gelayaan, anigaa u dawladaynaya igu halleeya illeen wasiir baan ahay imaka.
Saamiley: TEC maxay shalay kaa huruufayeen horta Guddoomiye?
Gudd-Wasiir: Anigaa wada-shaqayntooda joojin. Wasiirnimada nin SOMPOWER ah ayay diiddan yihiin iyo xilkayga. Indha-birtaba saw adhaxda kama jebin, kuwan biyo u kabban maayo.
Saamiley: Qabyaalad ayay korontada ku geliyaan xaafadaha qaar, ma maqashay Guddoomiye
Gudd-Wasiir: Shaqaalahooda gudaha dhiga. Wasiirnimada igula shaqaysta. Qabyaaladdooda waxa ka adag qarannimada
Saamiley: Maxaynu xannibaad kale samaynnaa Guddoomiye?
Gudd-Wasiir: Xeer inoo dan ah, iyagana xakame ku ah baan dejin oo barlamaanka marsiinayaa, miyaydan wasiirnimadayda ku kalsoonayn
Saamiley: Hadday diiddaanna Guddooniye?
Gudd-Wasiir: Hilfaha ayaa loo laabi, saw wasiir buuxa ma lihi.
Saamiley: Dee saamiley wanaagsan oo xukuumadda xidhiidh la leh ayaa dabadaa noo timi
Gudd-Wasiir: kkkk waan ku farxay in Ganacsade Maxamed innagu soo biiray..
Saamiley: Guryaha iska gashada ka warran Guddoomiye?
Gudd-Wasiir: Xadhiggooda jara, wasiirnimada ha illaawina.
Saamiley: Haye, Jimcaha dambe ha inoo ahaato
Gudd-Wasiir: Waar dee wasiir baan ahaye, waa maxay codka aad iga duubteen
Saamiley: Wallaahi daacad baan nahay, waxba kaama aannaan duubin
Gudd-Wasiir: Bal qaran baa la ii dhaariyee, labada hawlood waan isku wadiye nabagala waa inoo Jimcaha
Saamiley: Yaryarka nagu buuqaya maalmahan ma aragtay, sideen u jallaafaynnaa?
Gudd-Wasiir: Dheg ha u dhigina, saw agabkii qorraxda cadceedda ma haysanno, saw magaalada 90% macmiil inooma aha, saw qiimaha u sarreeya kuma qaadno korontada, saw wixii $10 ka yar ma aynu diidin… Maxaydun ka dhegaysan maati laga dhex hadlayo..
Saamiley: Sawdigan meelaha qaar caddaalad ka sheega guddoomiye
Gudd-Wasiir: Horta maxaan idhi, dee wasiirnimada hadalkeeda ayaa sidaas ah, shirka golaha wakiillada ayaan kagaga kacayay, miyaydaan arkin waxaan darraad ku dhigay Shirkadda Korontada Telesom. Nin waajibkiisa gudanaya ayaan ahay!
Saamiley: Nin adag baad tahay Guddoomiye, waa inoo Jimcaha
Gudd-Wasiir: Lexejecladu waa wax lagu adkaado, dee anigu idin maqlay oo Guddoomiye idinka diidi maayo, xanteenna cid ha u sheegina illeen wasiir baan ahaye.. Markaan suuqa isku aragno iyo xafiiska "wasiir” i dhaha. Weliba linkiga hoose ka daawada sida aan caddaaladda u jilo, waa mar aan Indha-birta cirka u calaamadinayay'e!